फेसबुकमा नयाँ फिचर!
Thursday, June 21 , 2018 | बिहीबार, आषाढ ७, २०७५ |
Global edition Setopati in nepali Setopati in english
सेतोपाटी काठमाडौं,चैत ७ print
स्नापच्याट स्टोरीवाला फिचर फेसबुकमा पनि समावेश गरिएको छ। इन्स्टाग्राम र वाटस्एपमा आइसकेको यस फिचरलााई सर्वाधिक प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले पनि समावेश गरेको छ।
यस फिचर्स अन्तर्गत फेसबुकको एपमा ‘फेसबुक स्टोरी’ मुनि साथी रहेकाहरु मध्येका केहिको फोटो देखिने छ जो २४ घण्टा पश्चात आफैँ हट्ने छ ।
हाल चिल्ली, ग्रिस र भियतनामका प्रयोगकर्ताले यस फिचर्सको मजा लिइरहेका छन् भने छिटै यस फिचर्स संसारभरीका प्रयोगकर्तामाझ पुर्याउने फेसबुकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ७, २०७३ १५:३१:५६
फेसबुक एपमा परिवर्तन, के भयो
फेसबुकको म्यासेन्जर एपमा परिवर्तन भएको छ। फेसबुकले यसलाई पुन डिजाइन गरेको हो। अहिले फेसबुक एपको प्रतिमहिना १ सय १० करोड युजर्स रहेका छन्। यो सुविधा एन्ड्रोइट र आइओएसमा मात्र रहेको छ। अपडेटपछि म्यासेन्जरको होम स्क्रिनमा परिवर्तन भएको छ।
अब फेसबुकबाटै खानेकुरा मगाउन सकिने
फेसबुकबाट अब खानेकुरा मगाउन सकिने भएको छ। त्यसका लागि फेसबुकले तयारी गरिरहेको छ। फेसबुकले फुड डेलिभर अप्सन राखेर त्यहाँ क्लिक गर्नासाथ खानेकुरा मगाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी फिल’ सार्वजनिक
सामसङले नयाँ फोन ‘ग्यालेक्सी फिल्’ सार्वजनिक गरेको छ। जापानमा लन्च गरिएको यस फोनको प्रि बुकिङ सुरु भइसकेको छ। यस फोन ४.७ इन्च एचडी डिस्प्ले, ३ जीबी र्‍याम र ३२ जीबी इन्टरनल मेमोरी तथा १.६ गिगाहर्ज ओक्टाकोर प्रोसेसरका साथै एन्ड्रोइड नोगाट भर्सनमा उपलब्ध छ।
जिओनीले ल्यायो ४ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन
जिओनीले चार वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ। एस टेन नाम दिइएको सो स्मार्टफोन चिनियाँ बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ। यस स्मार्टफोनको मुख्य विशेषता भनेको अगाडि र पछाडि डुअल क्यामरा राखिएको छ।
काठमाडौंमा सेवा विस्तार नगर्दै स्मार्टलाई फोरजी अनुमति!
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दुरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई फोरजी सेवा संचालनको अनुमति दिएको छ। यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगै फोरजीको लागि आवेदन दिएको स्मार्ट पहिलोचरणमा अयोग्य ठहरिएको थियो।
पुस्तकको अभावले व्यापार नै डामाडोल भयो
हामी पुस्तक पसलेहरुले सिजनका बेला पुस्तक पाउन सकेका छैनौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि पुस्तकको अभाव छ। कतिपय कितावहरु त अहिलेसम्म आएकै छैन। चर्को भाडा तिरेर व्यापार गरेका हामी व्यापारीले यो समय केही राहत पाउने बेला हो। तर सिजनमा पुस्तकहरु नपाएपछि पुस्तक पसलेले के बेच्ने ?
विष्णुप्रसाद खनाल, पाल्पा
सस्तो चस्माको फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै
झम्सिखेलमा मेरो क्रिष्टल अप्टिकल नामक चस्माको पसल छ। मैले दैनिक धेरै थरिका ग्राहकहरुसँग कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। चस्माको व्यापारमा ग्राहकहरुलाई बुझाउन निकै गाह्रो हुन्छ तर चस्माको बारेमा बुझेकाले भने गुणस्तरको मात्र ख्याल गर्छन्।
सरोज गोपाली, झम्सिखेल
सैलुनबाटै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएँ
मैले विगत ५ वर्षदेखि सैलुन खोलेर बसेकी छु । काठमाडौँ मलको तेश्र्रो तलामा ‘ब्युटि मार्क स्किन केयर एण्ड हेयर सैलुन’ खोलेदेखि पैसा कमाउन विदेश जानै पर्छ भन्ने मेरो सानैदेखिको सोच गलत साबित भएको छ। आफूले केही सिप सिकेर यही केही गर्न चाहने र लगनशिल भएर लाग्ने हो भने लासाको सुन यही कमाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराको दरिलो उदाहरण बनेको छ मेरो मिहेनत।
सञ्जिता परियार, काठमाडौँ
ड्राईमिटको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ कि हुदैन ?
नेपालीहरुको लागी ड्रइमिट(सुकाएको मासु) निकै लोकप्रिय छ। अझ बिदेश जान लागेकाले त साथीहरुको लागी कोशेलीको रुपमा पनि ड्रइमिट लैजाने गरेका छन्। काठमाडौंमा सानो पसल देखि ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा ड्राइमिट पाइन्छ र सस्तो देखि महँगो सम्म पाइन्छ। तर त्यो ड्राइमिट गुणस्तर कस्तो हो, कतिसम्म खान योग्य हुन्छ यो बारेमा खासै अनुगमन भएको पाइदैन। यो उपभोक्तको स्वास्थ्यका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस।
इश्वर नेपाल, चितवन
विदेशी भन्दा स्थानीय जुत्ता राम्रो
मैले धेरै प्रकारको जुत्ता लगाएँ। राम्रो गुणस्तरको जुत्तालाई महँगो पर्ने र सस्तो जुत्ताको गुणस्तर नहुने अनुभव गरेँ। यो धेरैले भोगिरहेको समस्या हो। मलाई एकजना साथीले स्थानीय जुत्ता खरिद गर्न सल्लाह दियो।
कमल अधिकारी, हेटौंडा
रात छिप्पेसँगै बजारमा तरकारी सस्तिँदो रहेछ
म अध्ययनको शिलशिलामा काठमाडौँको घट्टेकुलोमा बस्छु। काठमाडौंमा तरकारी तथा फलफूलको भाउ तुलनात्मक रुपमा महँगो छ। अझ बेलुकी ५ बजेतिर जाँदा त ब्यापारीहरुले भाउ घटाउनै मान्दैनन्।
सुमन अर्याल, घट्टेकुलो
फोटो खिच्दा पनि डिस्काउन्ट माग्छन् ग्राहक
मैले मैतिदेवीमा फोटो स्टुडियो राखेको करिव ५ वर्ष भयो। यो अवधिमा मैले हजारौँ ग्राहकको फोटो खिचेँ। फोटो स्टुडियोमा खासै डिस्काउन्टका लागि बार्गेनिङ हुँदैन र स्टुडियोमा फेन्सी पसलमा जस्तो डिस्काउन्ट गर्नका लागि भनेर धेरै मूल्य पनि तोकिँदैन।
विकाश दाहाल, फोटोग्राफर काठमाडौं
एकपटक धुदा जिन्स पाइन्टको रङ्ग खुइलियो
करिव एक महिना अगाडि मैले कलंकीको भटभटेनीबाट ३१ सय ७५ रुपैयाँमा एउटा जिन्स पाइन्ट किनेको थिएँ। पाइन्ट बेच्नेले पनि निकै राम्रो हो भन्यो र मैले पनि यति महँगो पाइन्ट भाटभटेनीबाट किनेको के डुब्लिकेट पर्ला र भनेर किनिहालेँ।
रोशन अधिकारी, चितवन
दश हजार रुपैयाँमै जोड्न सकिन्छ सिसिटिभी
घाटा खाएर रात्रि सेवा दिँदै साझा यातायात
‘अब सधै साझा बसमा सरर गइन्छ’
९७ लाख पर्ने कोबेल्कोको नयाँ एस्काभेटर नेपाल भित्रियो
प्रकाश ढुंगाना (संयोजक)